Politika… tsy misy fiovana sy fanovana | NewsMada
Politika… tsy misy fiovana sy fanovana
Famadihana palitao, fivarotan-tena hahazoana toerana, fitadiavana sy fiadiana seza… Hatramin’izao, mbola izany ny hoe fanaovana sy fahaizana politika. Miara-dalana amin’izany ny fampandriana adrisa, fanaratsiana ny hafa, fanoherana bontolo… Manginy fotsiny ny fifampiandrasana kendry tohina, ny fanararaotana, ny fanakorontanana…
Tsy zava-baovao rehefa mahazo fitondrana ny tsy firaharahana sy tsy fihainoana ny hafa, ny fitompoana teny fantatra fa fahavalom-pirenena izay tsy manohana fitondrana, potehina izay mitady hihetsika rehetra… Hanamarinana sy hanamafisana izany ny fampiasan-kery, ny fanamparam-pahefana, ny tsy fiaikena ho diso amin’izay lazaina sy atao…
Saika tsy nisy fiovana firy izany tamin’ny fitondrana nifandimby, fa nahita azy saika isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Tarazo ratsy, fomba fanao, heverina ho mandeha ho azy… Loza iray, loza roa… Izay tsy manao izany aza no lazaina fa tsy manao sy tsy mahay politika. Misy ny mirehareha sy efa maty eritreritra fa mety sy marina hatrany ny ataony.
Enti-manamarina izany ny fahazoana harena mihoapampana amin’ny fomba maizina, ny tahirim-bola any ivelany, ny fanjakazakan’ny fianakaviana sy ny namana, ny fanomezana vahana ny tsimatimanota na vahiny na teratany… Tsy ahoana na iza hiteny na iza tsy faly, atao ihany ny atao na potika aza ny firenena ary maty ny vahoaka.
Rehefa mahay mifehy sy mitantana ary manafina izany fomba tsy manjarin’ny maty eritreritra sy fanetribe izany no hoe mahay politika, marin-toerana, matanjaka… ? Tsy mahagaga raha mbola izao ny fiainam-pirenena, indrindra ny fiainam-bahoaka. Izany tsinona no hoe fitiavan-tanindrazana, fitsinjovana vahoaka, fampandrosoana…
Mandra-pahoviana? Mbola misy voafitaka sy voafintana amin’izany ihany hatramin’izao, tsy mijery lavitra fa ny eto sy ny anio ihany no hita noho ny fahantrana. Tsy misy izay fiovana sy fanovana. Misy dikany sy lanjany inona ny fifidianana, raha mbola izany ihany ny fomba fanaovana potika sy fakana fahefam-panjakana?
Une réponse à "Politika… tsy misy fiovana sy fanovana"
Marina 06/11/2017 à 18:21
tena marina mihitsy io e!!dia tena aleo marina mihaino ny tenen’i Maihol.Tsy mila mizara vola be sy t shirt @ propangady fa raha lany izaho dia hataoko ho henonareo ny fiovana; Sady olombaovao indray e!! Mba mety ho afaka ny adalan’ireo mpitady seza sy mpivadibadika rehetra ireo.Ary mba ho afaka koa ny tsindry ataon’ireo vahiny @ ntsika ireo, FMI Banque Mondiale……